दुनिया लठ्याउने हर्षिकाको जवानी ! (भिडियो)
चैत्र १३ मा रिलिजको तयारीमा रहेको चलचित्र ‘षडङ्ग’को अफिसियल गीत रिलिज भएको छ । सुरज सुनुवारको निर्देशन रहेको सार्वजनिक ‘लबी डबी…’ बोलको गीतमा अभिनेत्री हर्षिका श्रेष्ठ फिचरिङमा छिन् । पब्लिसिटी सुरु भएसँगै यो चलचित्र चर्चामा पनि छ ।
सार्वजनिक गीतमा स्वर मिना सिंहको रहेको छ भने शब्द तथा संगीत सुजेन्द्र डि. कार्कीको छ । गीतको निर्देशन गोविन्द राईले गरेका छन् । चलचित्रमा समिर सुनुवारको लगानी छ ।चलचित्रमा हर्षिकासँगै सौगात मल्ल, अनुप बराल, प्रियंका कार्की, ए गुरुङ, सौरमराज तुलाधर लगायतको अभिनय छ ।